I-Suite yabucala, yiya eDolophini naseLwandle - I-Airbnb
I-Suite yabucala, yiya eDolophini naseLwandle
Sikwibhloko enye ukusuka kwindlela yoluntu egangathiweyo, okukuhambo lwemizuzu eli-10 olusidibanisa nedolophu yaseQualicum Beach. Kwelinye icala kukho iHlathi leLifa leMveli, apho iindledlana zidlula kwindawo yokuma yeDouglas Firs yakudala. Ngaphaya kwehlathi kukho i-Qualicum Beach Golf Course kunye nolwandle, olukuhambo lwemizuzu eli-15 ukusuka kumnyango wakho.
I-suite ine-driveway yayo yabucala kunye nokungena. Ngaphandle kukho ipatio kunye ne-BBQ apho unokuhlala kwaye uphumle kwindawo yabucala. I-suite ifakwe kwikona ekude yendlu yethu apho kuthe cwaka. Ngaphakathi kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinefriji, isitovu, imicrowave, itoaster kunye nomatshini wokuhlamba izitya. Kwindawo yokuhlala kukho iscreen esisicaba seTV enentambo kunye neNetflix, i-intanethi yeWiFi, iincwadi kunye nemidlalo. Igumbi lokulala linebhedi entsha etofotofo elingana noKumkani. I-suite yi-550 square feet kunye negumbi layo lokuhlambela elinewasha kunye nesomisi. Isilingi evuthelweyo kunye neefestile ezinkulu zinika imvakalelo yobubanzi, ifaneleke ngokugqibeleleyo izibini okanye umntu oyedwa, nokuba kukwiholide okanye kuhambo lweshishini.
4.97 · Izimvo eziyi-98
Eli likhaya elizolileyo kunye nobumelwane, ngoko ke sicela ukuba iindwendwe zihloniphe ixesha elizolileyo le-10 PM ukuya ku-7 AM.
Imfihlo yakho ibalulekile kuthi. Nangona kunjalo, sihlala sifumaneka kwincoko okanye ukunika ulwazi lwasekuhlaleni ngeendlela zokuhamba, iindlela zokuhamba ngebhayisikile, ukufikelela elwandle, iindawo zokutyela kunye neendawo zomdla.